I-Piwik Ukuqhathanisa ne-Google Analytics: Izinzuzo ze-On-Premise Analytics | Martech Zone
I-Piwik Ukuqhathanisa ne-Google Analytics: Izinzuzo ze-On-Premise Analytics
ISonto, May 15, 2016 ISonto, May 15, 2016 Douglas Karr
Sasineklayenti esasincoma uPiwik kuye. Babehlangabezana nezinkinga ezithile ezibucayi zokubika ngazo zombili iGoogle Analytics nebhizinisi elikhokhelwayo analytics ngenxa yevolumu yezivakashi abebefika kusayithi labo. Amasayithi amakhulu awaboni ukuthi kukhona zombili izingqinamba zokubambezeleka nokulinganiselwa kwedatha ngeGoogle Analytics.
Iklayenti lalineqembu lewebhu elinethalente elinjalo analytics Ngaphakathi bekungaba lula. Kanye nokuguquguquka kokwenza ngokwezifiso ngokususelwa kungxenyekazi yabo, iqembu lokumaketha nalo lizonikezwa linembe kakhudlwana analytics, ngesikhathi sangempela, ngaphandle kwamaphutha ezibalo asuselwa ku- amasampula yezivakashi.
Uma uzizwa unqunyelwe yi-Google Analytics, Piwik kungaba enye indlela enhle Umphakathi wePiwik edition ingumthombo ovulekile analytics ithuluzi eliza nezibuyekezo ezijwayelekile nokukhishwa okusha mahhala. I-Piwik PRO esendaweni kufaka phakathi izici nezinsiza ze-premium ezahlukahlukene. IPiwik PRO futhi inikezela nge isixazululo sefu (lapho usengumnikazi wedatha) uma ungakhethi ukusingatha ngaphakathi. UPiwik ugcwele ukuqhathaniswa kwesisombululo ngasinye esizeni sabo.
Landa Ukuqhathanisa Okugcwele
UPiwik uphinde wakhipha i-infographic ngazo zonke izinzuzo abazinikezayo ngeGoogle Analytics. Kuyavunywa, lokhu kuyi-infographic ekhethiwe. I-Google Analytics iyanikezela IGoogle Analytics 360 weklayenti lebhizinisi. Futhi akufanele ihambe ngaphandle kokusho ukuthi iGoogle inenzuzo yokuhlanganiswa kweWebmaster ne-Adwords umhlinzeki ohlukile ongeke anikeze.
Izici zePiwik PRO
I-Piwik ifaka yonke imibiko ejwayelekile yezibalo: amagama angukhiye aphezulu nezinjini zokusesha, amawebhusayithi, ama-URL ekhasi eliphezulu, izihloko zamakhasi, amazwe abasebenzisi, abahlinzeki, uhlelo lokusebenza, isabelo semakethe yesiphequluli, ukulungiswa kwesikrini, ideskithophu ye-VS mobile, ukuzibandakanya (isikhathi esizeni, amakhasi ngokuvakasha ngakunye , ukuvakashelwa okuphindwayo), imikhankaso ephezulu, okuguquguqukayo kwesiko, amakhasi aphezulu wokungena / ukuphuma, amafayela alandiwe, nokunye okuningi, okuhlukaniswe ngezine ezine analytics imikhakha yokubika - Izivakashi, Izenzo, Abadlulisi, Izinjongo / i-e-Commerce (imibiko engama-30 +). Bheka Uhlu olugcwele lwezici zikaPiwik.
Ukuvuselelwa kwedatha yesikhathi sangempela - Bukela ukugeleza kwesikhathi sangempela kwewebhusayithi yakho. Thola ukubuka okuningiliziwe kwezivakashi zakho, amakhasi abavakashele kanye nezinhloso abazibangele.
Ideshibhodi eyenziwe ngokwezifiso - Dala amadeshibhodi amasha ngokulungiswa kwewijethi okulingana nezidingo zakho.
Yonke Ideshibhodi Yamawebhusayithi - indlela engcono yokuthola ukubuka konke okwenzekayo kuwo wonke amawebhusayithi akho ngasikhathi sinye.
Irowu Evolution - Idatha yamanje neyedlule ye-metric yanoma yimuphi umugqa kunoma yimuphi umbiko.
Izibalo ze-e-commerce - Qonda futhi uthuthukise ukubonga kwebhizinisi lakho eliku-inthanethi kwi-e-commerce esezingeni eliphakeme analytics izici.
Ukulandelwa kwemigomo yokuguqulwa - Landela imigomo bese ubona ukuthi uhlangabezana yini nezinhloso zebhizinisi lakho lamanje.
Ukulandelela umcimbi - Kala noma yikuphi ukuxhumana ngabasebenzisi kumawebhusayithi nakuzinhlelo zakho zokusebenza.
Ukulandela Okuqukethwe - Linganisa okuvelayo nokuchofoza kanye ne-CTR yama-banner wesithombe, ama-banner wombhalo nanoma iyiphi into esemakhasini akho.
Izibalo Zokusesha Kwesiza - Landelela ukusesha okwenziwe kunjini yakho yosesho yangaphakathi.
Ubukhulu Ngokwezifiso - Nikeza noma iyiphi idatha yangokwezifiso kuzivakashi zakho noma ezenzweni zakho (njengamakhasi, imicimbi,…) bese ubona ngeso lengqondo imibiko yokuthi kukangaki ukuvakashelwa, ukuguqulwa, ukubukwa kwamakhasi, njll. Bekukhona nge-Custom Dimension ngayinye.
I-geolocation - Thola izivakashi zakho ukuthola ngokunembile Izwe, Isifunda, Idolobha, Inhlangano. Buka izibalo zezivakashi ebalazweni lomhlaba ngezwe, isifunda, idolobha. Buka izivakashi zakho zakamuva ngesikhathi sangempela.
Ukushintshwa kwamakhasi - Buka okwenziwe izivakashi ngaphambi nangemva kokubuka ikhasi elithile.
Ukumbondelana kwekhasi - Khombisa izibalo ngqo ngaphezulu kwewebhusayithi yakho ngembondela yethu ehlakaniphile.
Imibiko yesivinini sesayithi nekhasi - Ugcina ithrekhi yokuthi iwebhusayithi yakho ikuletha ngokushesha kangakanani okuqukethwe kuzivakashi zakho.
Landelela ukuxhumana okuhlukile komsebenzisi - Ukulandelela okuzenzakalelayo kokulandwa kwamafayela, ukuchofoza kuzixhumanisi zangaphandle zewebhusayithi, nokulandela ngomkhondo amakhasi we-404
Ukulandelelwa komkhankaso wezibalo - Ibona ngokuzenzakalela amapharamitha womkhankaso we-Google Analytics kuma-URL akho.
Landelela ithrafikhi kusuka ezinjini zokusesha - Bangaphezu kuka-800 izinjini ezahlukene zilandelwa!
Imibiko ye-imeyili ehleliwe (imibiko ye-PDF neye-HTML) - Shumeka imibiko kuhlelo lwakho lokusebenza noma kuwebhusayithi (amawijethi angama-40 + ayatholakala) noma shumeka amagrafu e-PNG kunoma yiliphi ikhasi langokwezifiso, i-imeyili, noma uhlelo lokusebenza.
Izichasiso - Dala amanothi ombhalo kumagrafu akho, ukuze ukhumbule ngemicimbi ethile.
Awukho umkhawulo wedatha - Ungagcina yonke idatha yakho, ngaphandle kwemingcele yokugcina, kuze kube phakade!
Ukuhlanganiswa - enama-CMS angaphezu kwama-40, izinhlaka zewebhu noma izitolo ze-Ecommerce
Izibalo zohlelo lokusebenza lweselula ne-Piwik iOS SDK, i-Android SDK, neTitanium Module.
Tags: okuhlukile kuma-google analyticsizibalo apiidatha yezibaloukulinganiselwa kwezibaloama-analytics aphethweizibalo ezisesimweni sokuqalaPiwikifu le-piwikumphakathi we-piwikpiwik proi-piwik kuqhathaniswa ne-gai-piwik kuqhathaniswa ne-google analyticsi-piwik vs gai-piwik vs google analyticsizibalo zesikhathi sangempelaizibalo ezimhlophe zelebula
Yakha Ubudlelwano Bamakhasimende Obusimeme nokuqukethwe kwekhwalithi